Kambodza : Manontany ny Oliravin’ny vanja milevina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2009 19:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, 繁體中文, Français, বাংলা, bahasa Indonesia, English
“ Mananjo ho tsara tarehy ny olona rehetra !” No nanombohan'ny Mpifaninana ho Oliravin'ny olona voan'ny vanja milevina ny taratasy misokatra nosoratany, izay fifaninanana natombok'i Morten Traavik avy ao Norvezy. Araka ny voasoratra ao amin'ny tranokalam-pifaninanana, hanomezana fankaherezana ireo mitondra takaitra noho ny vanja milevina sy hihaikana ny fijery ny antsoina mahazatra hoe hatsaran-tarehy ity fifaninanana ity. Hahazo solo-tongotra raitra indrindra ny mpandresy. Efa nanao ity fifaninanana Oliravin'ny vanja milevina ity tany Angola I Traavik, ary efa teo am-pikarakarana ny hetsika tany Kambodza tamin’ity volana ity raha nanapa-kevitra ny tsy hanohana ity fifaninanana ity ny fitondram-panjakana Kambojiana ary nanafoana ny fisoratana anarana avy eo.
Nitatitra ny The Mirror fa nandà hanohana ny fifaninanana ihany koa ny fikambanana maro, tahaka ny fikambanana Kambojiana misahana ny sembana rehefa nilaza ny minisiteran'ny raharaha sosialy ny antitra ary ny fampidirana ao amin'ny fiaraha-monina ny tanora ny tsy fankasitrahany ity fifaninanana ity, tamin'ny filazany fa mety hiteraka tsy fifankahazoan- kevitra mikasika ny kilemaina ity fifaninanana ity.
Mazava loatra raha maro ny hevitra nipoitra amin'ity fifaninanana Oliravin'ny (tratran'ny) vanja milevina ity.
Jinja dia nanoratra hoe:
Mifangaro ao anatiko ao ny fahatsapana manoloana ny finaonaonan'ny mpifaninana, fa manaiky kosa ny hevitra fonosiny amin’ny ankapobeny: Izany hoe manan-jo ny hahatsapa ho afa-po amin'ny tenany ny mpandray anjara sy amin'ny ahitana azy, ary tsy miankina amin'ny toe-draharaha izany. Tsy manameloka ny mpifaninana aho, eritreretiko fa ity fanafoanana ity dia mampiseho ny fihisitrisitry ny fiaraha-monina Khmer manoloana ny zavatra maoderina sy ny fihevitra vahiny mba hironany amin'ny lazainy hoe nenti-paharazana sy ‘salama’.
Ny sehatra filazam-baovao CAAI dia namoaka ny hevitry ny mpamaky, izay natao an-taratasy tamin'ny voalohany ho an'ny tonian'ny Phnom Penh Post. Manontany ny mpamaky hoe mankahery e ity fifaninanana hatsara-tarehy ity:
Raha ny momba ny hatsarana kosa , firafitra hatsarana manao ahoana moa no asongadina? Nitsidika ny tranokala aho ary nahita ny sarina vehivavy marobe avy any ambanivohitra maro samihafa manao akanjo ambonin'atin'akanjo sy akanjo fohy, izay mety ho tsy fitenany isan'andro ka toy ny haingo diso toerana izany. Moa ve mikendry zava-tsoa tokoa ny mpikarakara, mandrisika ny fomba fijery tandrefana ny atao hoe “fampaherezana” izay mametraka ny hatsarana sy ny fahafahana ho manaitaitra fiakanjo mampisongadina bika sy mampiseho vatana? Raha ny faniriako dia ny mahita an’ireo vehivavy miakanjo izay tiany hanaovana, fiakanjo tandrefana sa Khmer mahazatra, maoderina sa mitana ny nentin-drazana, izay mampisongadina ny tena hatsarany indrindra.
Araka an'i Details are Sketchy dia voalaza fa nandao an'i Kambodza i Traavik, saingy mbola mikasa ny hiroso lalindalina amin'ny fifaninanana ihany izy, amin'ny alalan'ny fisafidianana an-tserasera. Io sary eo ambany io dia mampiseho ny mpifaninana Miss iray Siem Reap, sary izay nalaina avy ao amin’ny tranokalam-pifaninanana.